SOOMAALIYA OO DIB UUGA FIIRSANAYSA KAMID AHAAN SHAHA JAAMACATUL CARAB! – Balcad.com Teyteyleey
Dawlada soomaaliya waxay ka mid tahay ururka jaamacada carabta mudo 43 sanadood ah. Waxayna marwalba ka ahaa jirtay xubin firfircoon. Soomaaliya waxay u hiilisay dawlada masar oo ay u diri jirtay dharka ciidanka iyo kabaha haraga kasamaysan ee buudhka ah ee soomaaliya soo saari jirtay. Waxay u diri jirtay dalka masar hilibka.dalka ciraaq markii ay la diri rayeen iiraan soomaaliya way caawisay.dalka yemen waxaa loo diri jiray macalimiin ka caawisa tacliinta. Dalka soomaaliya marwalba waxa uu hiil iyo hooba la garab taagnaa walaalaheen carbeed. Waxaa la xeerinaayay darisnimo diinta ina walaalaysay iyo carabnimada aynu kamidka nahay ururka ku bahoobay carabnimada.
Markii aynu burburay oo dawladii dhexe iska duminay,walaalaheen carbeed maysan qaadan doorkii ay soomaaliya ka mudnayd. Wax ciidan ah inooma soo dirin, wax taakulayn ah qaabkii soomaaliya oo dal carbeed ah loogu soo dabaali lahaa hanaankii dawladnimo inaguma aysan caawin mudo daas aadka u dheer oo soomaaliya silcaysay. Walaalaheen waxay inagu daawanayeen laba dal eithiopia iyo kenaya oo dhul soomaaliyeed xoog ku haysta oo guumaysta dad soomaaliyeed in ciidamadooda dalkeena lookeeno dawlada fadaraalka ayay ilaalinayaan.
Walaalaheen carbeed ma waayin dhaqaale iyo ciidan inay inagu taageeraan mana kari waayin inay dawlad inoo dhisaan oo ina daba qabtaan.Lama garankaro waxa arintaa carab ku xanbaaray!? dhanka kale ma inkirayno hay ado dhawr ah oo mucaawimo keena gaar ahaan xiliyada abaarta daran ku dhufato soomaaliya, laakiin taa dunida oo dhan ayaa qaarkamid ahi inoo soogurmadaan bini aadmino darteed. Laakiin intaa ay inoo keeneen carabi kuma inkirayno waana ku mahad sanyihiin balse maha waxaan kamudnayn intaa iyo wax u dhawtoona.
DUULAANKA CARBEED EE ILLAAHAY FASHILAY
Waxba yaysan ina tarin carabi, laakiin waxaa soomaalidii ka fajicisay oo la dhakofaareen oo lama filaan ku noqotay in carabi duulaan ku tahay in dib danbe aan loo helin dawlad soomaaliyeed oo dhisanta. Waxay carabi taa ka door biday in laynoo kala qaybiyo kenya iyo eithiopia oo gaalo u taliso oo xukunto marwalba labadaas dal iyadoo dadka ku nool labadaas dal ee muslimka la liido oo la xaqiro.
Hada carabi waxay dareentay in dalkeena uu cagta saaray wadadii dawlad nimo soomaaliyana ay bislaatay oo ay rabaan inay dawlad nimadoodii soo ceshadaan khayraadkana la soo baxaan.
Wadamada reer galbeedka iyo qaarkaloo farabadan ayaa doonaya inay soo saaraan khyaraadka dhex ceegaaga dalkeena oo ah shiidaal bada iyo barigaba ka buuxa iyo macdan kaleba.
Carabi marabto in laynoo qodo shidaalkeena.waxayna soomaalida isugu diraan qabiil qabiil iyo gobol gobol si aysan dawladi u dhalan ee ay soomaalidu isaga ahaato qabiilooyin aan ahayn qaran iyo dawlad.dawladihii soomaaliyeed ee tan ka horeeyay waxay siyaasiyiintooda siin jireen lacag ayagoo ogsaan in lacagtaasi aan shacabka iyo dalka soomaaliyeed lasiin doonin ee ay nin jeebkii ku ekaanayso.siyaasi kasta waxay siiyaan lacag oo farqaha isaga u buuxshaan.
Waxay ka shaqeeyaan qaabkasta oo aysan dalkan uga dhalan dawlad xoogleh oo dalka hanata oo shaqaysa.hadana waad aragtaan inay inagu celinayaan xiligii dagaal ooga yaasha oo layaqaan yalaxoow system.
Dr Gaas lacag ayaa lasoo siiyay, si uu ulugooyo in dawlad ka dhalto dalkaan,Xaaf iyo shariif iyo somaliland sidoo kale in nin walbaa halkiisa ka hawlgalo oo la jabiyo in dawladi ka dhalato soomaaliya. Carab waxay sidan u yeelaysaa oo kaliya waa in aan shidaalka lasoo saarin dawladna dhalan.Hadaba hada shacabkii soomaaliyeed ayaa dawladooda ka codsaday in xiriirka loo jaro carab oo laga baxo gabi ahaanba ururka jaamacada carabta balmarkaa aan aragno cidii caano ka maashee. Carab iyadaa inoo baahan marwalba hadana waa in aan kabaxnaa ururkaa markaa waxaa dhab noqonaysa mudo yar in aan ku noqonayno dad iyo dawlad iyo dal jira.
Jaamacada carabtu waxay hortaagan tahay in soomaaliya ay lugaheeda isku taagto.shacabka soomaaliyeed iyo dawlada soomaaliyeed waxay ogaadeen duulaanka carabi inagu soo qaaday.waxaa dhibka inoo keenay ku jiritaanka ururka jaamacada carabta.in Marykan iyo Ingiriis sida uu shidaal ugu soo saaray iyaga ayay inoo diidan yihiin in aan keenana laynoo soosaaro. waxay kamayr san yihiin Maraykan iyo Ingiriiska aynu isla jaan qaadnay oo soomaaliya ay noqonayso dalka ugu qanisan dunida.
The post SOOMAALIYA OO DIB UUGA FIIRSANAYSA KAMID AHAAN SHAHA JAAMACATUL CARAB! appeared first on Ilwareed Online.